Ihu igwe: gini bu ya, njirimara ya, ihe ndi ozo | Netwọk Mgbasa Ozi
E nwere ọtụtụ ndị na-emegharị ihe ihu igwe nkịtị na meteorology. Mgbe anyị na-ezo aka na ihu igwe anyị na-ekwupụta usoro niile nke mgbanwe nke mgbanwe dị iche iche nke ikuku karịrị oge. Ihe mgbanwe ndị a nke ikuku bụ ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, nrụgide nke ikuku, ọchịchị ikuku, ikuku anyanwụ, wdg. A na-ahụkarị ihu igwe site n'oge ebe nke mbụ na-ezo aka n'ọnọdụ dị ogologo na mpaghara. Metee nka sɛ mete nka sɛ mayɛ ankonam.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, ụdị, ebumnuche na ihe niile nke ihu igwe.
1 Kedu ka ihu igwe dị
2 Weatherdị ihu igwe
3 Ihe ihu igwe
Ọ na-ezo aka n'ụdị mgbanwe niile nke mgbanwe dị iche iche na ọnọdụ ihu igwe nke mmasị. A kọwara njirimara ndị a maka otu mpaghara ala. Mpaghara mpaghara ala dị iche iche nke ụwa nwere ihu igwe jikọtara ma kpebisie ike site na ihe anụ ahụ na mmekọrịta dị n'etiti ihe ndị a. A maara usoro a niile nke mgbanwe ihu igwe dị ka usoro ihu igwe. Ihe ndị a na-arụ ọrụ n'usoro n'usoro ma na-emeghachi mmekọrịta ọbụna na oke ikuku.
Ihe gbasara mmekọrịta ihu igwe dị ka ndị a: ikuku, hydrosphere, lithosphere, biosphere na ihe biosphere. N'otu oge ahụ, a na-amụrụ ihu igwe site n'echiche dị iche iche nke akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro nhazi na mmepe nke ụwa anyị niile. Ebumnuche bụ isi bụ ịme amụma dị iche iche na ịghọta usoro ndị dị na ọnọdụ nke ikuku.
Ihu igwe bụ ihe dị mkpa n’atụmatụ ọrụ mmadụ dị iche iche. Karịsịa ọ na-emetụta ọrụ akụ na ụba niile nke mmadụ chọrọ ọnọdụ gburugburu ebe obibi kpọmkwem. Otu n’ime ha bụ ọrụ ugbo. Mgbanwe na ihu igwe ụwa dịka ọ dị mgbanwe ihu igwe na okpomoku zuru uwa nwere ike buru ihe ojoo nye ndu mmadu.
Anyị maara na dabere na ebe anyị nọ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi ugbu a enwere ụdị ihu igwe dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, na ihu igwe ugwu, okpomọkụ na-adịkarị oyi. Enwere otutu usoro iji wepu ugwu site na iji ubube na omumu banyere okwu a. Nchịkọta kachasị mfe niile bụ ịga ogo nke okpomọkụ na otu ihu igwe. Ka anyị lee ihe dị iche na ụdị ihu igwe dabere na ọnọdụ okpomọkụ:
Na-ekpo ọkụ ihu igwe: Ọ bụ ebe ahụ na-enyekarị okpomọkụ dị elu oge niile. N'ebe a, anyị na-ahụ ikuku mmiri, ala okpomọkụ, ala akọrọ, mbara ọzara na ọkara ọzara. N'ime igwe ndị a, e nwere usoro okike na obere ihe dị iche iche na ndị ọzọ nwere ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Ma ọ bụ na naanị mgbanwe na-emetụta ịdị adị nke ndụ abụghị okpomọkụ. Dịka ọmụmaatụ, na mpaghara ebe okpomọkụ, enwere ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa ebe ọ bụ na mmiri ozuzo dị elu.
Ọnọdụ ihu igwe na-agwụ ike: ọ bụ ụdị nke ihu igwe dị n'etiti ọkụ na oyi. O nwere ọdịiche dị mkpa gbasara oge na ọtụtụ mgbanwe na ihu igwe. N’ebe a, anyị na-ahụ ebe mmiri na-ekpo ọkụ, Oke Osimiri Mediterenian, osimiri na kọntinent
Oge oyi: Ọ bụ ebe a na-ahụkarị okpomọkụ kachasị dị ala n'ime afọ. Ha na enwe otutu umu anumanu na enye ndu ojoo nke na anaghi ekwe ka mmepe osisi na osisi. Anyị nwere pola, ugwu ma ọ bụ ihu igwe.
Climatology nwere ọtụtụ ihe na-atụkarị ma nyochaa n'ime afọ niile iji guzobe ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke mpaghara. Anyị ga-ahụ nke bụ isi ihe ndị a na-amụ ma nyochaa ka ha nwee ike iwepụta amụma ogologo oge:
Ime ụlọ: bụ ogo nke okpomọkụ ma ọ bụ oyi nke na-adịkarị na ikuku ikuku nke mpaghara. Ọnọdụ okpomọkụ na-ebili ma ọ bụ na-agbachitere dabere na ọnụọgụ nke radieshon nke na-emetụta ebe a kapịrị ọnụ.
Ikuku mgbali: A na-akọwa nrụgide nke ikuku dị ka ịdị arọ nke ikuku dị na mbara igwe. Ọ bụ nrụgide na-arụ ọrụ n'akụkụ niile na igwe ikuku dị na ikuku nke mpaghara. Ọ bụ otu n'ime mgbanwe ndị kachasị emetụta ihe ndị ọzọ dị na mbara igwe n'ihi ike nke ikuku.
Ifufe: usoro ikuku bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nrụgide dị iche na ikuku. Ma ọ bụ na mgbanwe ndị a na nrụgide nke ikuku na-eweta mwepụ nke igwe ikuku anyị maara site na aha ikuku. Ntughari a nke igwe ikuku na-enye ohere ikesa ike na ikpo oku niile n'otu ebe.
Iru mmiri: bụ ogo nke alụlụ mmiri dị na ikuku. Otu akụkụ nke mmiri mmiri bụ mgbe mmiri dị na vepo ikuku na ikuku ga-adịgide ruo mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi gbanwere.
Ọdịda: ụbara mmiri dị ukwuu dị na mbara igwe na-eduga na ya odide maka nhazi igwe ojii. Igwe ojii na-ebugharị site na ifufe ma mgbe ha ruru oke ọkpụrụkpụ, ụmụ irighiri mmiri na-adaba n'okpuru ibu ha.
Enwere ihe ụfọdụ dị mkpa iji chọpụta ihu igwe nke otu mpaghara. Ka anyị lee ndị kacha mkpa:
Latitude: ọ bụ ọnọdụ mbara ala mpaghara a kapịrị ọnụ. Igwe ikuku na nsogbu nke ụzarị anyanwụ na-emetụta nke ukwuu. Ọ bụ ekele na ohere a pụrụ ịkọwa oge nke afọ nke ọma. Ma ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ dabere na ogo nke ọchịchọ nke ụzarị anyanwụ.
Altitude: ihe gradient gburugburu ebe obibi bu ihe di mkpa nke na-agbanwe di elu. Ọ bụghị otu ihe iji tụnyere ọnọdụ okpomọkụ na oke osimiri karịa ka ọ dị elu. Dị ka ọ dị, uru nke gradient gburugburu ebe obibi bụ ogo 3 kwa mita 100. Nke ahụ bụ, ka anyị na-arị elu, ọnọdụ okpomọkụ na-ada. Otú ahụ ka ọ dịkwa nrụgide nke ikuku.
Osimiri ugbu a: ngagharị nke mmiri oke osimiri bụ maka ịkesa ikuku na oyi n’uwa niile.
Anya site n'oké osimiri: ịdị nso nke ụsọ oké osimiri dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ nnukwu mmiri mmiri na-ekpebikwa oke iru mmiri dị na ikuku.
Mee ka: Ntuziaka maka ọdịdị ala nke mbara ala nwere ike ime ka mpaghara dịkwuo ala ọkọchị ma ọ bụ oke iru mmiri.
Ifufe direction: igwe ikuku na-agbagharị ma kwe ka ikuku na-ekpo ọkụ na oyi na-agbasa site na mpaghara dị iche iche.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe gbasara ihu igwe na ihe bụ ihe ndị dị mkpa na-emetụta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Kedu ka ihu igwe dị